သူတို့လေးမိနစ် created “NYE Customized Countdown” in audio form. Then,afew years later into the highly acclaimed 4K, graphic-intense video countdown which has changed New Year’s Eve events all over the world.
တရားဝင် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအံ့သြဖွယ်တစ်ခုကိုဖန်တီး “party-all-night” energy နေရာများမှာ။ DJ စေ့စပ်, လူအစုအဝေးကခုန်စောင့်ရှောက်ပေးသောသတ်မှတ်နှင့်ဘားမှာအမြတ်အစွန်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်တိုးမြှင့်ဖို့သန်းခေါင်၏လေဖြတ်အတိတ်လမ်းကိုသောက်သုံး!
သင့်ရဲ့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ type ကိုရွေးပါ။ သင့်ရဲ့လိုဂို, တပ်မက်လိုချင်သောထုံးစံစကားသံကိုစိတျအပိုငျး, ဖိုင် format နှင့်အခြားရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာ Upload လုပ်ပါ။